ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်း — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါကအေးမြနဲ့အံ့သြဖွယ်င်ထင်ပါသလဲနေစဉ်, ငါကဖြစ်တချို့ကိုထုတ်လုပ်သကဲ့သို့အထင်ကြီးရဲ့စဉ်းစားကြဘူး. နေ့တိုင်းရှိပါတယ်…
အမိန့်၌ငါ့ကိုပြီးပြီဘာမှမရရန်အဘို့အ, ငါမကြီးကျယ်သောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာပေါ့သောသဘောလိုအပ်ပါတယ်. "ဒါပေမဲ့လျှင်ငါသည်ဤအမှိုက်များထဲကယူ, ထိုအမှိုက်ယောက်ျားသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်?"ကျွန်မနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာကောင်လေးပေါ့, ငါမရှိသလောက်အသေးစိတ်ကိုသို့မဟုတ်ငွီးငှေ့ဖှယျတာဝန်များကိုမှရေးဆွဲတာပါ. ကံမကောင်းသဖြင့်, အသေးစိတျနဲ့ငွီးငှေ့ဖှယျတာဝန်များကိုမှန်ကန်အသက်တာ၏အများစုဖြစ်ကြသည်. ငါရုန်းကန်ဘာဖြစ်လို့ဒီအဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်…
ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်ငါ့ပျော်စရာ၏အဆုံးကိုဆိုလိုတာ? ဒါကတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းရဲ့နဲ့ကျွန်မမေးမြန်းဖို့တရားမျှတသည့်တဦးတည်းထင်. မကြာခဏခြယ်ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏တယောရုပ်ပုံရှိပါတယ်. လူခရစ်ယာန်ဘာသာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအရာထင်. တချို့ကတီဗီတရားဟောဆရာအော်ဟစ်ထင်, အခြားသူများကိုကြီးမားတဲ့အသင်းတော်ကိုဦးထုပ်အတွက်ဝတ်စုံကိုသို့မဟုတ်ဟောင်းလူမည်းအဖွားအတွက်အဖြူကောင်လေးထင်. တချို့နိုင်ငံရေးကွန်ဆာဗေးတစ်သို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာမကြိုက်ဘူးသောသူတို့သည်လူထင်. ဒါပေမဲ့လူအနည်းငယ်ကသာခရစ်ယာန်ဘာသာထင်နှင့်ထင်: ဟေး, ကလုပ်ဖို့ပျော်စရာအရာဖြစ်လိမ့်မယ်! ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်လူများတို့အားပျော်စရာမထင်ထားဘူး.
ခရစ်ယာန်ဘာသာတစ် killjoy အဖြစ်ဂုဏ်သတင်းကိုဆည်းပူးခဲ့သည်. ဒါဟာပျင်းစရာလူများနှင့်အဟောင်းလူတို့အဘို့အရာတစ်ခုခုရဲ့. သီချင်းတစ်ပုဒ်တရက်ပ်ကပြောပါတယ်, "သင်ကြောက်နေလျှင်, ထို့နောက်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုသွားပါ။ "ရသည်မှာခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကြောက်ဘို့,, ကြောက်ပါတယ်ပန့်ခ်. ပြည်သူ့ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသငျသညျဝတ်စုံနှင့်ကြာမြင့်စွာဆင်မြန်းဝတ်ဆင်ရန်ရှိသည်ကိုဆိုလိုသည်ထင်, နှင့်မကောင်းတဲ့ခရစ်ယာန်သီချင်းနာ​​းထောင်, နှင့်အေးမြဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်. ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, y'all အချို့ကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌အေးမြသောမဟုတ်, ဒါပေမယ့်အခြားပုံပြင်ရဲ့.
ကိုယ့်မနေ့ကဒီဂျာနည်းဥပဒေတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းစောင့်ကြည့်. သူဟာအသင်းတော်များနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည်. မိမိအတှေ့အကွုံမြားသည်အသင်းတော်၌သင့်ကိုအစဉ်အတိုင်းလာကပြောပါတယ်…
ငါလေးတွေကိုချစ်. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယျ့ကိုယျကိုပြသသောကွောငျ့ငါလေးတွေကိုချစ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကနည်းနည်းမှန်နဲ့တူနေ. ငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပြောပြပါရစေ. ကလေးတွေကတော်တော်အများကြီးကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်ရှိသည်တူညီတဲ့ပြဿနာရှိ, သူတို့သေးသူတို့ကိုပုန်းရှောင်ဖို့ဘယ်လိုသိကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲဒီပြဿနာတွေကိုပဲအများကြီးပိုပြီးသိသာများမှာ. ကလေးတွေသူတို့လုပ်ဖို့အမှုအရာထင်မနေကြပါလျှင်ဤတကယ်ရှင်းပါတယ်.
သငျသညျအစဉျအမွဲသူတို့မထိဖို့ထင်မနေဆိထိတွေ့တစ်ခုခုမြင်ကြပြီ? သငျသညျရှာနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကမြင်ခြင်းငှါပတ်လည်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်. အခြားဆိတ်သငယ်ကိုကြည့်လျှင်သူတို့ကဂရုမစိုက်ပါဘူး; သူတို့ပဲအရွယ်ရောက်သူသို့မဟုတ်မိဘများကိုမြင်ချင်ကြဘူး. သူတို့အဘယျကွောငျ့ပြုကြ, သော်လည်း? သူတို့သည်သင့်အားသွင်းနေသိသောကြောင့်, သူတို့သည်သင့်ကိုသူတို့မှဖြေဆိုရန်ရှိသည်တင့်ကိုသိသောကြောင့်သူတို့သည်သင့်အထဲကရှာတွေ့ချင်ကြပါဘူး.
အရွယ်ရောက်ပြီးတူညီသောလမ်းဖြစ်ကြောင်း. မကြာခဏဆိုသလိုကျနော်တို့လုပ်ဖို့ထင်မနေအမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်နှင့်အတူ OK ကိုနေ, နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့မှဖြေဆိုရန်ရှိသည်လူတစ်ဦးထွက်ရှာပါဘူးအဖြစ်. သငျသညျရှေ့ရဲများကမြင်သည်အထိသင်မြန်နှုန်းမှဝမျးမွောကျနေ. ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပြထုတ်မတှေ့ဘူးအဖြစ်အလုပ်ထားခဲ့ဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါပဲ. ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအချို့နေသမျှကာလပတ်လုံးပါမောက္ခဖမ်းပါဘူးအဖြစ်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ခိုး…
ယေရှုအကြောင်းလူတွေကိုပြောပြကြှနျုပျတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ကျနော်သိလိုက်ပါတယ်သောသူတို့သည်လည်းထိုအမှုအရာတစျခုဖြစ်ဟန်, သေးအပေါင်းတို့သည်ငါတို့နှင့်လုံလောက်လုပ်နေတာမဟုတ်နှင့် ပတ်သက်. အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရ. ငါလက်ျာဘက် Am? ငါတယောက်တည်း Am? တောင်မှပဲဒီအတိတ်အပတ်က, ငါသည်ငါ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထဲကတစ်ခုနှင့်အတူတည်ဆောက်ရန်စတင်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုချွတ်လဲစတင်ခဲ့ပြီငါပြစ်ဒဏ်ခံစားခဲ့. ငါအကြောင်းကြောင်းဆကျဆံရေးအပျေါကိုတည်ဆောက်သင့်ပါတယ်သကဲ့သို့ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအဖြစ်ဖြစ်ကြပြီမဟုတ်, နှင့်ယေရှုအကြောင်းသူ့ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားရန်ဆက်လက်. ငါမကြာခဏဤနည်းခံစားရတူနှင့်ပုံ. ငါမေးချင်သောမေးခွန်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်? fixed ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဘယျသို့နှလုံးရှုထောင့်? ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုသက်တမ်းတိုးရမည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ငါရယ်အဘယ်ကြောင့်သတိရဖို့ရှိသည်…
အမြဲအကြောင်းပြောနေတာနဲ့ကောင်းသောဘဝပြီးနောက်လိုက်ဖမ်းရဲ့ဂီတမဆိုအမျိုးအစားရှိပါတယ် အကယ်., က hip-hop ရဲ့. ငါ hip-hop ကိုချစ်. ငါသည်ငါ၏တစ်ခုလုံးကိုအသက်အဘို့ hip-hop ကိုချစ်ကြ. ထိုဗုံအကြောင်းတစ်ခုခုပဲရှိတယ်, နှင့် Rhymes, အမြဲ၌ငါ့ကိုရေးဆွဲင်နှင့်စွမ်းအင်. ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက, သို့မဟုတ်အတန်းထဲတွင်အိပ်ပျော် - - ငါအတန်းအစား၌ဖြစ်စေ, အိပ်ပျော်မဟုတ်ခဲ့ကြသောအခါငါသည်ငါ့အကြိုက်ဆုံးအဆိုတော်တွေဟာနားထောင်ပြီးခဲ့သည်. ငါသည်သူတို့၏တိုင်းစကားလုံးအပေါ်ဆွဲထားဖို့အသုံးပြု, ထိုသူတို့ဆိုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်. ငါအများဆုံးအဆိုတော်တွေဟာဆရာများဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသည်မဟုတ်သိ, ဒါပေမဲ့ငါလေ့လာသင်ယူမခံခဲ့ရမဆိုလိုပါ. ငါသည်ကောင်းသောအသက်တာအကြောင်းကိုသူတို့၏အတွေးအခေါ်များမှအနီးကပ်စကားကိုနားထောငျ - နှငျ့ငါကြားသိသောအရာကိုကြိုက်တယ်.
ငွေတစ်ဦးအရာသည်မဟုတ် "ကဲ့သို့ငါအကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုခဲ့,သူဌေး Get သို့မဟုတ်ကြိုးစား Die "နှင့်ငါနှင့်တူခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအယ်လ်ဘမ်ကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ်" ။ "တကယ့်ကောင်းကျိုးကိုအသက်တာ၏အကြှနျုပျ၏စိတ်ကူးတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ဒါကြောင့်ပင်နီးကပ်အလိုမရှိကြောင်းကျပ်ရှိခြင်းခဲ့ကွောငျးအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်. ဒါဟာအားလုံးပိုက်ဆံအကြောင်းမဟုတ်ခဲ့, သော်လည်း. ငါ hedonism အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ, ပေါ့ပေါ့လိင်, ရုပ်ဝါဒ, တာဝန်မဲ့မှု, ပျင်းရိခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးများ, နှင့်ရိုသေလေးစားမှုလာပြီ - ထိုသောပဟေဠိဖို့ကိုအပိုင်းပိုင်းအဖြစ်အားလုံး…
ကောင်းပြီပဋိညာဉ်တရားသစ်, ယနေ့ညအကြောင်းကိုသောငါတို့စာသားကိုဆွေးနွေးပွဲ, နီးပါး remix ကဲ့သို့ဖြစ်၏. ငါသည်ဘုရားသခင်ကသူ့လူမျိုးနှင့်ပဋိညာဉ်တရားသစ်လုပ်ကတိပြုကွောငျ့ပွောဆို, ဒါပေမယ့်အကြောင်းအရာခပ်သိမ်းအသစ်မဟုတ်ပါဘူး. သူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုပြောင်းလဲမမူ, သူ့ရဲ့ကတိတော်မပြောင်းခဲ့ပါ, သူ့ရဲ့ခြုံငုံရည်ရွယ်ချက်မပြောင်းခဲ့ပါ. သို့သော်ဤပဋိညာဉ်နှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအမှုအရာကြောင့်ရှိပါတယ်…
သငျသညျငါနှင့်အတူအဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ. ထှကျမွောကျရာမှာတော့ 17, သူတို့ကိုယ်တော်ကိုမယုံကြည်နိုင်လျှင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်ဣသရေလအမျိုးကိုစမ်းသပ်ဘုရားသခင်၏လူ. အရာအားလုံးပြီးနောက်သူကသူတို့ကိုအဘို့ပြုင်, သူတို့ကိုမိမိလူအောင်, ကျွန်ခံနေရာကနေသူတို့ကိုပို့ဆောင်, ဒါကြောင့်အပေါ်သူတို့အဘို့အပေးနဲ့, သူတို့နေဆဲကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြဘူး. ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်း…
ယရှေုသညျ, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏အပြည့်အဝ, ယော်ဒန်မြစ်မှပြန်လာသောနှင့်အတွင်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဦးဆောင်ခဲ့သည်…
အခြို့သောအမှုအရာမှာကောင်းသောနေသောလူတချို့ရှိပါတယ်. နှစ်နှင့်အနှစ်များအတွက်လိဂ်တွင်ကစားမိမိတို့အလုပ်အကိုင်များကိုကြွယ်ဝသောမင်္ဂလာပြီးစီးခြင်းအဘယ်သူသည်ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားရှိပါတယ်. သူတို့ကခစျြတဲ့ဂိမ်းကစားချင်တယ်နဲ့သူတို့ကလုပ်နေတာဟာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစေချင်တယ်. သူတို့ကပြုသူတို့သည်ကောင်းသောနေ. ထိုအခါကိုအခြားသူများရှိပါတယ်, မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်နဲ့တူ.
မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကောင်းသောထက်ပိုမိုခဲ့. သူကြီး - များစွာသောငြင်း, အကြီးမြတ်ဆုံး. မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန့်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်နှင့်အတူအကြောင်းအရာမဟုတ်ခဲ့. သူ Mike လူတိုင်းထက်ပိုကောင်းစေလို. သူကအောင်နှင့်အတူအကြောင်းအရာမဟုတ်ခဲ့, သူသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်. ဒါကြောင့်သူကနောက်ပိုင်းမှာလူတိုင်းထက်အားကစားရုံ၌ နေ. , သူကလူတိုင်းထက်ပိုခက်အလုပ်လုပ်ခဲ့. ထိုမင်းသည်နက်ရှိုင်းစွာသင်ရိုက်နှက်ဖို့အလိုဆန္ဒအားဖြင့်ဤအမှုရှိသမျှကိုမောင်းနှင်ခဲ့သောကြောင့်,. သငျသညျသိတငျးစကားကသူ့ခန်းမမှာဒီကိုမြင်လျှင်. သူကဆဲရှေးရှေးစိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်သူ၏ယှဉ်ပြိုင်သဘာဝဘယ်တော့မှရှေ့ကတူထွက်လာသ. သူကမောင်းနှင်ခဲ့.
သင်တို့သည်လည်း Lil Wayne တူအနုပညာရှင်တွေအကြောင်းပြောဆိုနိုင်. ကိုယ့်ကျော်ကြားဖြစ်နဲ့ငွေရှာဖို့လိုသူအချို့အဆိုတော်တွေရှိပါတယ်. မ Lil Wayne. သူ၏အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်လိုလား…